परिचय : व्यवसायी र व्यवसायको - नन्दु गुरुङ
नेपाली भिजन । सोच त सबैको ठूलो हुन्छ तर त्यहि सोचलाई व्यवहारमा परिणत गर्न भने जो कोहिलाई त्यति सजिलो छैन । सानै उमेरबाट केहि गर्दछु भन्ने भावना बोकेर आफ्ना संघर्षका पाइलाहरुलाई धेरै क्षेत्रहरुमा सक्रिय गराउँदै आईपर्ने विभिन्न कठिनाईहरुलाई आफ्नो लगनशिलता र मेहनतले सहजै पार लगाउन सक्ने श्रृजनशिल व्यक्ति हुनुहुन्छ नन्दु गुरुङ । वास्तविक नाम नन्द भएता पनि सबै संग उहाँ नन्दु नामबाटै परिचित हुनुहुन्छ । नेपालको लमजुङ जिल्लाको बाग्लुङपानी–६ मा एउटा मध्यम परिवारमा जन्मिनु भएका उहाँको परिवारमा बुवा, आमा, ४ जना दाईहरु, १ दिदी र श्रीमती हुनुहुन्छ । एसएलसी पछि पढाईलाई निरन्तरता दिंदै उच्च शिक्षाका लागि काठमाण्डौ आई असकल बाट १९८९ मा बिएस्सी पूरा गरी किर्तिपुरबाट एम ए प्रथम वर्षसम्म नेपालमा अध्ययन गर्नु भयो । नेपालमा छँदा पनि उहाँले शिक्षक पेशा देखि लिएर अन्य संस्थाहरुमा पनि केहि वर्ष कार्य अनुभव बटुल्नु भएको थियो ।
यसरी पढाई संग संगै सुन्दर भविष्यका सपनाहरु बुन्दै सन् १९९५ को अक्टोबरमा अष्ट्रेलिया आउनु भएका उहाँले क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटी बाट विजनेश विषयमा व्याचलर सम्मको अध्ययन पुरा गर्नु भयो । अष्ट्रेलिया आएपछि सुरुका दिनहरुमा धेरै क्षेत्रमा कार्य गरी कार्य अनुभव बटुलेको बताउनु हुने उहाँ पढाई संगसंगै अन्य संघसंस्थाहरु लगायत सामाजिक कार्यहरुमा पनि उत्तिकै लगाव बढाउदै जानु भयो । तमु समाज सिड्नी, ग्रानभिल राइनोज फूटबल क्लवको संस्थापक, ग्रानभिल नेपलिज कम्युनिटी क्लवमा अध्यक्ष सम्मको जिम्मेवारी वहन गरी समाजलाई अघि बढ्न मद्धत गरिरहनु भएको छ । मोर्टगेज ब्रोकर भई व्यवसाय गरिरहनु भएका उहाँ सिड्नीमा हाल श्रीमती सरु गुरुङका साथमा बस्दै आउनु भएको छ । तिनै श्रृजनशिल व्यवसायी नन्दु गुरुङ संग द नेपाली भिजन अष्ट्रेलियाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
प्रश्न १, सक्सेस् मोर्टगेज एण्ड फाईनान्स् कम्पनी बाट कस्ता किसिमका सेवाहरु प्रदान गर्दै आउनु भएको छ ?
होम लोन, कार लोन लगायत यस सम्बन्धि ग्राहकलाई गुणस्तरिय सेवा तथा परामर्श दिने जस्ता कार्य हामीबाट हुन्छ । साथै सस्तो र भर पर्दो क्यष्अिष्तभच मिलाई दिने समेत गर्दछौं ।
प्रश्न २, तपाईलाई यस व्यवसाय गर्न के कुराले आकर्षित गर्‍यो ?
म यस व्यवसायमा आकर्षिक हुनुको कारण मुख्यत: मेरो कामको व्यागराउन्ड बैङ्किङ् भएकाले हो । म कमनवेल्थ बैङ्कमा ८ वर्ष काम गरेको र मेरो मोर्टगेज इन्डष्ट्रीमा नलेज र चाख पनि भएको कारणले गर्दा केहि वर्षको सोचाई पछि यस क्षेत्रमा आएँ ।
प्रश्न ३, आफ्ना ग्राहकलाई तपाई कुन हद सम्मको सेवा दिन सक्नुहुन्छ अर्थात ग्राहकहरु तपाईकोमा नै सेवा लिन किन आउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्छ ?
मेरो सर्भिस भनेको एउटा क्लाइन्ट आएपछि इमान्दार र ओपन कन्भरसेसन का साथै एक्सपर्ट र प्रोपर एडभाइस दिने हो । म जे गर्दछु क्लाइन्टको हितको लागि गर्दछु । Clients Are Centre Of Everything I do. । बैङ्कबाट पाइने Low Interest Rate, low or Zero Fee / Free , Up front Valuator को फाइदा उठाउन म हरेक क्लाइन्टलाई सहयोग गर्दछु ।
प्रश्न ४, अष्ट्रेलियामा बसोवास गर्ने नेपालीहरुलाई पहिलो घर किन्दा कस्तो कुरामा बढी बिचार पुर्याउने सल्लाह दिनु हुन्छ ?
पहिले घर किन्दा खास आफू कुन एरियामा बस्ने हो, एरिया डिटरमाइन् गरेर त्यहि एरियामा फोकस गर्ने । धेरैजसो नेपाली कपलहरु योङ छन् र धेरै जसो कि त १/२ सन्तान भएका वा हुनेवाला हुन्छन् त्यसले गर्दा त्यो एरियाको स्कूल कस्तो छ भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनु पर्दछ । त्यस्तै डिपोजिट कति राख्न सकिन्छ, सकभर २० प्रतिशत डिपोजिट राखेमा घर किन्ने खर्च कम हुन्छ । जस्तो कि २० प्रतिशत डिपोजिट राख्यो भने एलएमआई माफ हुन्छ र लोन स्वीकृत गर्न सजिलो हनुका साथै ब्याज दर पनि राम्रो पाइने सम्भावना हुन्छ । त्यसै गरी डेमोग्राफी हेर्ने, एरियाको ग्रोथ दर हेर्ने, ट्रान्जिट कति नजिक छ, बतावरण कस्तो छ भन्ने कुराहरु ध्यान दिने । त्यस्तै पुरानो किन्ने कि नयाँ ब्राण्ड किन्ने भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।
प्रश्न ५, तपाईले गरी रहनुभएको व्यवसायको वर्तमान र भविष्य कस्तो रहेको छ ?
यो पेशा अहिले त धेरै राम्रो छ तर एकदम प्रतिस्पर्धात्मक छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले हामीलाई आफ्नो पफर्मेन्समा सुधार ल्याउन मद्धत गर्दछ । यस्को भविष्य अझै राम्रो हुने देखिन्छ किनकी एकातिर नेपालीको संख्या बढेकै छ र हामी अरु कम्युनिटी तिर पनि लागि रहेका छौं । मान्छेहरुको घर र विजनेस किनबेच गर्ने क्रम सँधै जारी नै रहन्छ ।
प्रश्न ६, व्यवसायमा आउनु पूर्व र आइसके पछि तपाईले आफूमा कस्तो फरक पाउनु भयो ? कुनै अनुभव ?
व्यवसायमा आउनु अगाडि र आइसके पछि म खासै फरक पाउँदिन कि म बैङ्कमा यहि काम गर्दथें । फरक यति हो की त्यसबेला तलबमा गरिन्थ्यो अहिले आफ्नै लागि गरिन्छ ।
प्रश्न ७, व्यवसाय गर्नुका साथ साथै खेलकुद तथा सामाजिक कार्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहनु हुन्छ, कसरी समयलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
खेलकुद र समाज सेवा मेरो सोखको विषय हो । म सानै देखि खेलकुदमा अत्यन्त लागि पर्ने त्यसैले खेलकुदमा समय निकाल्न गाह्रो छैन मलाई । समाज सेवामा पनि यहाँ आए देखि नै लागिरहेको छु । सानै उमेर देखि समाजमा केहि गर्नु पर्दछ, समाज सुधारमा लागेर सकारात्मक परिवर्तन ल्याई सबैको भलो हुने काम गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु त्यसैले समाज सेवामा पनि सकभर समय निकाल्ने गरेको छु ।
प्रश्न ८, फुर्सदको समय कसरी बिताउनु हुन्छ ?
प्राय: नेपाली म्युजिक सुन्ने, रियालिटी टिभी हेर्ने, टिभीमा फूटवल हेर्ने, न्युजहरु सुन्ने पढ्ने र साथीभाईहरु संग समय बिताउने गर्दछु । मलाई साथीभाई संग भेटेर खेल र समाज सेवाका कुरा गर्दा खुब आनन्द आउँछ ।
प्रश्न ९, एनआरएनए अष्ट्रेलियाको चुनाव नजिकिदै छ, कस्ता व्यक्तिहरुलाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउनु पर्छ जस्तो लाग्दछ ?
एनआरएनएमा खास गरी नेपाली राजनीति बाट प्रभावित नभएका विशुद्ध समाज सेवाको भावना भएका र योग्य मानिसहरुलाई निर्वाचित गर्न जरुरी छ । कनै पनि शक्ति केन्द्रको दवावमा नपरी निष्पक्ष निर्णयहरु गर्न सक्ने व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पुगेमा एनआरएनए ले धेरै सकारात्मक उपलब्धिहरु हाँसिल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।